आ.ब. २०७६/७७ मा राष्ट्रबैंकको आर्थिक समीक्षा | रक्त न्युज
आ.ब. २०७६/७७ मा राष्ट्रबैंकको आर्थिक समीक्षा
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको वार्षिक औसत मुद्रास्फिति ६.१५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले देशको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको गत आर्थिक वर्षको तस्विर प्रस्तुत गर्दै यस्तो दाबी गरेको हो ।
समीक्षा अवधिमा आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात ०.६ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष आयात १३.९ प्रतिशतले र निर्यात १९.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल वस्तु निर्यात ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९७ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात १९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ ११.८ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः ४३.५ प्रतिशत र १८.२ प्रतिशतले घटेको छ ।
कुल वस्तु आयात १५.६ प्रतिशतले घटेर रु.११ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १९.९ प्रतिशत, ११.५ प्रतिशत र ५.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ०.५ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले कमी आई रु.८७५ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।
शोधनान्तर स्थिति रु. २८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति रु. ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चालु खाता घाटा ८७.९ प्रतिशतले घटी रु.३२ अर्ब ६ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा रु.२६५ अर्ब ३६ करोड थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ३५ करोड रहेको चालु खाता घाटा समीक्षा वर्षमा ३२ करोड ६० लाख रहेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । उक्त सञ्चिति १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्रबैंकले जनाएको छ ।
२०७७ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको कुल निक्षेप रु.३८ खर्ब ४० अर्ब र निजी क्षेत्रमाथिको दाबी रु. ३२ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको केन्द्रीय बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो लेखमाभारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३० लाख नाघ्यो
अर्को लेखमाविदेशबाट पीसीआर परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आएका अब सिधै घर जान पाउने